မွေးပြီးနောက် ဗိုက်သည် ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဂရု စိုက်ခြင်း နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကြည့်ရအောင်။
ကလေး မွေးဖွား ပြီးနောက် ချက်ချင်း ဗိုက်သည် နဂို အတိုင်း ပြန် ရောက် မှာလား? ဒါမှ မဟုတ် အဲ့ဒီ အခြေ အနေ အတိုင်း ဆက်ရှိ နေမှာလား။ အဲ့ဒီ စိတ်ပူ မှုကို ဖြေရှင်းရန် မွေးဖွား ပြီးနောက် ဘယ် လို ပြောင်းလဲမည် ဆိုသည်ကို ကြည့်ကြ ရအောင်။
မီးဖွားပြီး ချက်ချင်းတော့ အရင် အတိုင်း ပြန်ဖြစ်မည်
မီးဖွား ပြီးနောက် (ဆေးရုံ ဆင်းသည့် အချိန်မှာ ကိုယ်ဝန် မဆောင် ခင်ဝတ် ခဲ့သည့် လှပသော အဝတ် များကို ဝတ်မယ်လို့ တွေးထား
သော အမေ များလည်း မနည်း ပါဘူး။
မွေးဖွားပြီး ချက်ချင်းတော့ ထင်ထား သလောက် ဗိုက်သည် လျော့ ကျ လာမည် မဟုတ်ပါ။ အဝတ် ကြီးကြီး ပြင်ဆင် ထားခြင်း၊ (သို့) ဗိုက်ဖုံး အကျီ လောက်နှင့် ကွက်တိ ပါပဲ။
သားအိမ် ကျုံ့တာ နှင့်အမျှ သေးငယ် လာမည်။
(ကလေး မွေးပြီး တာတောင် ဘာလို့ ဗိုက်က နဂိုအတိုင်း ပြန်မ ဖြစ်တာလဲ) လို့ ထင်ကောင်း ထင်ကြမည်။ မွေးဖွားပြီး ချက်ချင်း အရင် အတိုင်း ပြန်မ ဖြစ်ခြင်းသည် သားအိမ်က ဆက်လက်ကြီး နေစဲ ဖြစ်၍ သားအိမ် ကျုံ့တာ နှင့် တပြိုင်နက် နဂို အတိုင်း ပြန်ဖြစ် သွားမှာပါ။
ကိုယ်အ လေးချိန်က နဂို အတိုင်း ပြန်ဖြစ် ပေမဲ့လည်း ခန္ဓာကိုယ် ပုံစံကတော့?
ကိုယ်ဝန် မရှိ ခင်ကထက် တိုးလာသည့် ကိုယ်အ လေးချိန် ကနေ
ကလေးနှင့် အချင်း၊ ရေအိတ် အလေး ချိန်၏ ၄-၅ kg စာကို နှုတ်ပြီး ကျန်တဲ့ အလေး ချိန်သည် အဆီ ဖြစ်သည်။ မွေးပြီး ၆လ ကြာထိ
က နဂို အတိုင်း ပြန်ဖြစ် ဖို့အ ကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကိုယ်အ လေးချိန် နဂိုအတိုင်း ပြန်ဖြစ် ရင်တောင် ကိုယ်ခန္ဓာ ပုံစံ ကတော့ နဂို အတိုင်း ပြန်မ ဖြစ်နိုင်ပါ။ ကိုယ်ဝန် မဆောင်မီအချိန်က ပုံစံကို ပြန်လို ချင်သော မိခင် များက မွေးပြီး နောက်သုံး အောက်ခံ အဝတ်၊ အထူးပြု လေ့ကျင့် ခန်းများ လိုအပ် လာပါမည်။ ကြိုးစား ကြရအောင်။！
ဗိုက်ကြော ပြတ်မျဉ်းက ပျောက်မှာလား?
စိတ်မ ကောင်းစ ရာက တစ်ကြိမ် ထွက်ပေါ် လာသည့် ဗိုက်ကြော ပြတ်မျဉ်းသည် ပျောက်မှာ မဟုတ်ပါ။ ဒါပင်မဲ့ ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန် မှာ မျဉ်းက အနီရောင် ဖြစ်၍ ထင်ရှား ပင်မဲ့ မွေးပြီး နောက်မှာ တော့ အနီ ရောင်သည် လျော့သွား ပြီး ဖြူလာ သောကြောင့် ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန် နှင့်ယှဉ်လျှင် မသိ သာတော့ ပါ။
အမေလည်း မိန်းက လေးဘဲ.
ကိုယ်ဝန် မဆောင် မီက ခန္ဓာကိုယ် ပြန်လို ချင်ခြင်း ကဖြစ်ရိုး ဖြစ်စဉ် ဖြစ်သည်။
ဒါဆိုရင် ဘယ်လို လုပ်ရင် နဂိုဗိုက် ပြန်ဖြစ် နိုင်ပါ သလဲ！？
တင်ပါး ဆုံရိုး ပြန်ကောင်း ဖို့က အဓိက!
မွေးဖွားဖို့ အတွက် ပွင့်ထွက် လာသည့် တင်ပါး ဆုံရိုးက မွေးဖွား ပြီးနောက် ၂လ အကြာတွင် နဂို အတိုင်း ပြန်ဖြစ် ပါသည်။
ဒါပင်မဲ့ မွေးဖွား ပြီးနောက် ကြွက်သား နည်းသွားပြီး ထင်ထား သလို
နဂို အတိုင်း ပြန်မ ဖြစ်တာ တို့ရှိသည်။ တင်ပါး ဆုံရိုးက ပွင့်ရက်
သားအတိုင်း ဆိုလျှင် ကိုယ်ခ န္ဓာသည် အတွင်းကို ကာကွယ်ရန် အရေပြား အောက်တွင် အဆီ တိုးလာ၍ မွေးဖွား ပြီးနောက် ပို၍ ဝလာ ရခြင်း အကြောင်းလည်း ၇ှိသည်။ တင်ပါး ဆုံရိုးကို ဗိုက်ချပ် ခါးစည်းဖြင့် စည်းခြင်းဖြင့် နဂို အတိုင်း ပြန်ဖြစ်ဖို့ အကူ အညီ ပေးရာ ရောက်ပါသည်။
ဒါပင်မဲ့ မွေးဖွား ပြီးနောက် ကိုယ်ခန္ဓာ ပြန်ကျန်း မာဖို့က နံပါတ်၁ ဖြစ်သည်။ မွေးဖွား ပြီးနောက် ချက်ချင်း ဗိုက်ချပ် ခါးစည်းခြင်း၊ ကြွက်သား လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်းက ဆီးထွက် ကျခြင်းနှင့်
ဆက်စပ် နေခြင်းလည်း ရှိတတ်သည်။ အနည်းဆုံးံ၇ပတ် -၈ပတ် ကြာမှ ကိုယ်ခန္ဓာ အခြ အနေနှင့် ညှိ၍ လေ့ကျင့်ခန်း ကို စလုပ်
ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန် ဖြစ်လွယ်သော ဗိုက်နှင့် ကျောရဲ့ ကြွက်သား
ကို ကျအောင် လုပ်ဖို့က ဗိုက်ကြွက်သားနှင့် ကျောကြွက် သားကို
သန်မာအောင် လုပ်လျှင် ကောင်း၏။
အိမ်မှာလည်း လွယ်လွယ် ကူကူ လုပ်နိုင်သော လေ့ကျင့် ခန်းကို မိတ်ဆက် ပေးမည် ဖြစ်သောကြောင့် စမ်းကြည့်ပါ။
၁။ ထိုင်ခုံ ပေါ်မှာ ထိုင်နေတဲ့ အချိန် ကိုယ်နေ ဟန်ထားကို
ုပျော့ပျော့ ပျောင်းပျောင်း ထား၍ ခြေထောက်ကို၆၀ဒီဂရီ ဟပြီး အားစိုက် နင်းပါ။
၂။ ဗိုက်ပေါ်မှာ လက်တင်၍ "a,i,u,e,o" လို့ အသံ ထွက်ရင်းနဲ
ဗိုက်ကို အတွင်းသို့ ဆွဲကြည့်ပါ။
("a,i,u,e,o") ကို တစုံလို့ သတ်မှတ်ပြီး တနေ့ကို ၁၀စုံ လုပ်ကြည့် ပါ။